အိမ်ရှင်မတစ်ဦးကြောင့် သူတောင်းစားဘ၀မှ ကုမ္ပ္ပဏီ တစ်ခုရဲ့ ဥက္ကဌဖြစ်လာသူ – PoPinVdo
အိမ်ရှင်မတစ်ဦးကြောင့် သူတောင်းစားဘ၀မှ ကုမ္ပ္ပဏီ တစ်ခုရဲ့ ဥက္ကဌဖြစ်လာသူ
March 12, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)ဗဟုသုတNo Comment on အိမ်ရှင်မတစ်ဦးကြောင့် သူတောင်းစားဘ၀မှ ကုမ္ပ္ပဏီ တစ်ခုရဲ့ ဥက္ကဌဖြစ်လာသူ
လူ နှင့် တန်ဖိုး
တစ်ခါက သူတောင်းစားတစ်ယောက်ရှိတယ် သူ့ရဲ့ ဘယ်ဖက်လက် တစ်ဖက်လုံး ပြတ်ထားရှာတယ်
ကြည့်လိုက်ရင် တော်တော်လေးကို သနားဖို့ကောင်းပြီး လူတော်တော်များများကလဲ သူ့ကို ဆိုရင် စွန့်ကြဲပေးကမ်းလေ့ရှိတယ်
တစ်နေ့မှာ သူဟာ အိမ်လေးတစ်အိမ်ဆီကိုရောက်လာပြီး တောင်းရမ်းတယ်
အိမ်ရှင်မက ငွေလိုချင်ရင် အိမ်ရှေ့က အုတ်ခဲတွေကို အိမ်နောက်ဖေးကို အရင်ပြောင်းပေးဖို့ သူ့ကို ပြောလိုက်တယ်
သူတောင်းစားဟာ စိတ်တိုပြီး အိမ်ရှင်မကို “ကျနော် လက်တစ်ဖက်ပြတ်နေတာကို ခင်ဗျား မြင်ရက်သားနဲ့ ကျနော့ကို ဒီလို လုပ်ခိုင်းနေတာ ခင်ဗျားနောက်နေတာလား?” လို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ်။
မထင်မှတ်ထားတာက အိမ်ရှင်မဟာ အုတ်ပုံရှေ့မှာ ထိုင်ချလိုက်ပြီး လက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ အုတ်တုံးတစ်တုံးကို မ,ယူကာ အိမ်နောက်ဖေးကို သွားပို့ပြီး အိမ်ရှေ့ပြန်လာခဲ့တယ်
ပြီးတော့ အိမ်ရှင်မက သူတောင်းစားကို “ငါတောင် လက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ ဒီအုတ်ခဲကို မ, နိုင်တာ နင်လက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ မ, မ နိုင်ဘူးလား?” လို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ်
သူတောင်းစားကလဲ ဘာမှပြန်ပြောစရာမရှိတော့ဘဲ ခေါင်းကို ငုံ့ပြီး အုတ်ခဲတွေကို လက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်း သယ်ရွှေ့ပေးလိုက်တယ်
နှစ်နာရီ လုံးလုံး လုပ်ပြီး မှ အုတ်ခဲတွေ သယ်လို့ပြီး သွားတယ်သူတောင်းစားခမျာမှာ ချွေးတွေရွှဲလို့ပေါ့
အိမ်ရှင်မဟာ ချွေးတွေသုတ်ဖို့ သူ့ကို ပုဝါ အဖြူတစ်ထည်ကမ်းပေးလိုက်တယ်
သူ့ရဲ့ မျက်နှာနဲ့ လည်ပင်းတွေကို သုတ်လိုက်တော့ ပုဝါ အဖြူ ဟာ အမည်းရောင်ပြောင်းသွားတယ်လေ နောက်ထက် အိမ်ရှင်မဟာ သူ့ကို ငွေ ၂၀၀၀ ကျပ်ပေးလိုက်တယ်
သူတောင်းစားက အိမ်ရှင်မကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း အကြိမ်ကြိမ် ပြန်ပြောလိုက်တယ်
အိမ်ရှင်မက “ငါ့ကို ကျေးဇူးတင်စရာ မလိုပါဘူး ဒါဟာ မင်းရဲ့ချွေးနဲ့ သွေးနဲ့ကြိုးစားပြီးမှ ရလာခဲ့တဲ့ လုပ်အားခပါ” လို့ ပြောတယ်
သူတောင်းစားကလည်း အခိုက်အတန့်လေး အတွေးတစ်ခုဝင်လာပြီးနောက် “ကျနော် ခင်ဗျားကို ဘယ်တော့မှ မေ့မှာ မဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါပေမယ့် ကျနော် တစ်ခုလောက် တောင်းဆိုပါရစေ ဒီ ပုဝါလေးကို ကျနော့် အတွက် အမှတ်တရလေးဖြစ်အောင် ပေးနိုင်မလားခင်ဗျာ? ”
အိမ်ရှင်မက ” ရပါတယ် ယူသွားပါ ” လို့ ပြောလိုက်တော့ သူတောင်းစားခမျာ ပုဝါလေးကိုကြည့်ပြီး ဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေရှာတယ်
နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာပြီး နောက်ပိုင်းမှာအဲဒီ သူတောင်းစားဟာ အ၀တ်အစား သပ်သပ်ရပ်ရပ် နဲ့ တစ်ချိန်က သူအုတ်ခဲသယ်ရွေ့ပေးခဲ့ရတဲ့ အဲဒီအိမ်ရှေ့ကို ပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်
အသက်ကြီးနေပြီဖြစ်တဲ့ အိမ်ရှင်မကြီးကို မြင်တော့သူက“ကျနော် အရင်တုန်းက သူတောင်းစားပါအခုတော့ ကုမ္ပ္ပဏီ တစ်ခုရဲ့ ဥက္ကဌ ဖြစ်နေပါပြီ
ခင်ဗျားဟာ ကျနော့်ရဲ့ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ပြန်ရှာပေးခဲ့သူပါ
ကျနော့်ရဲ့ ယုံကြည်စိတ်ကို ပြန်လည် တည်ဆောက်ပေးခဲ့သူပါ
ခင်ဗျားသာ မရှိရင် ကျနော်ဟာ လေလွင့်နေဦးမှာ အမှန်ပါဘဲ” လို့ ရင်ထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲအသံလေးနဲ့ ပြောလိုက်မိတယ်
အိမ်ရှင်မက “ဒါတွေ အားလုံးဟာ မင်းကိုယ်တိုင် တည်ဆောက်ခဲ့တာတွေပါဘဲ…မင်းဘဝကို မင်းကိုယ်တိုင် တန်ဖိုးရှိရှိရပ်တည်နိုင်ခဲ့လို့ အခုလို အခြေအနေဖြစ်လာတာပါ” လို့ ပြောတယ်။
အဲ့ဒီနောက်လက်တစ်ဖက် ကုမ္ပ္ပဏီ ဥက္ကဌ ဟာ အိမ်ရှင်မကြီးကို အိမ်တစ်လုံး လက်ဆောင်ပေးဖို့ပြောတယ် အိမ်ရှင်မကြီးက လက်မခံဘဲ ငြင်းပယ်လိုက်ပါတယ်
ဥက္ကဌကြီးက ဘာကြောင့်ငြင်းပယ်လိုက်တယ်ဆိုတာကို နားမလည်နိုင်ဘူးအိမ်ရှင်မက ရယ်ပြီး ပြောလိုက်တယ်
“ငါတို့ မိသားစု အားလုံးဟာ လက်တစ်စုံဆီ ရှိကြတယ်လေကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်တိုင်ရပ်တည်ပြီး ဘဝတစ်ခုကို အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိ တည်ဆောက်လို့ ရပါတယ်
လူဆိုတာဟာ တန်ဖိုးရှိရှိ ရှင်သန်ဖို့ အရေးကြီးတယ်
ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေးစားသလို ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိတဲ့ ကိုယ်နဲ့သိတဲ့ လူတွေကိုလဲ ဂုဏ်သိက္ခာတက်လာအောင် လုပ်ပေးဖို့လိုတယ် မသိတဲ့ လူတွေကိုလဲ လေးစားဖို့လိုတယ်
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း တပါးသူကို လေးစားတန်ဖိုးထားမှ တစ်ပါးသူကလည်း ကိုယ့်ကိုယ် ပြန်၍ လေးစားတန်ဖိုးထားလာမယ်။ ကိုယ့်ဘက်က မပေးဆပ်ဘဲ တစ်ပါးသူဆီက အရင်ရဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ကိုယ့်ရဲ့ အလုပ်ကနေ ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာကို ဖော်ထုတ်နိုင်မှလဲ ကိုယ့်ရဲ့ ဘ၀ဟာ တန်ဖိုးရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်
ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အလုပ်ကို လုပ်တယ် ငွေကြေးရရှိမှုက တခြားသူတွေလောက်မများပေမဲ့
ပိုက်ဆံချမ်းသာပြီး ၀ိဥာဉ်ကင်းမဲ့နေတဲ့သူတွေထက်စာရင် ဘဝတစ်ခုကို ရှင်သန်ရတာဟာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး အသက်ရှု ပြီး ပို၍ တန်ဖိုးရှိပါလိမ့်မယ်”
လူ နှငျ့ တနျဖိုး
တဈခါက သူတောငျးစားတဈယောကျရှိတယျ… သူ့ရဲ့ ဘယျဖကျလကျ တဈဖကျလုံး ပွတျထားရှာတယျ…
ကွညျ့လိုကျရငျ တျောတျောလေးကို သနားဖို့ကောငျးပွီး လူတျောတျောမြားမြားကလဲ သူ့ကို ဆိုရငျ စှနျ့ကွဲပေးကမျးလရှေိ့တယျ…
တဈနမှေ့ာ သူဟာ အိမျလေးတဈအိမျဆီကိုရောကျလာပွီး တောငျးရမျးတယျ…
အိမျရှငျမက ငှလေိုခငျြရငျ အိမျရှကေ့ အုတျခဲတှကေို အိမျနောကျဖေးကို အရငျပွောငျးပေးဖို့ သူ့ကို ပွောလိုကျတယျ…
သူတောငျးစားဟာ စိတျတိုပွီး အိမျရှငျမကို “ကနြျော လကျတဈဖကျပွတျနတောကို ခငျဗြား မွငျရကျသားနဲ့ ကနြော့ကို ဒီလို လုပျခိုငျးနတော ခငျဗြားနောကျနတောလား……?” လို့ ပွနျပွောလိုကျတယျ။
မထငျမှတျထားတာက အိမျရှငျမဟာ အုတျပုံရှမှေ့ာ ထိုငျခလြိုကျပွီး လကျတဈဖကျတညျးနဲ့ အုတျတုံးတဈတုံးကို မ,ယူကာ အိမျနောကျဖေးကို သှားပို့ပွီး အိမျရှပွေ့နျလာခဲ့တယျ…
ပွီးတော့ အိမျရှငျမက သူတောငျးစားကို “ငါတောငျ လကျတဈဖကျတညျးနဲ့ ဒီအုတျခဲကို မ, နိုငျတာ… နငျလကျတဈဖကျတညျးနဲ့ မ, မ နိုငျဘူးလား……?” လို့ ပွနျပွောလိုကျတယျ……
သူတောငျးစားကလဲ ဘာမှပွနျပွောစရာမရှိတော့ဘဲ ခေါငျးကို ငုံ့ပွီး အုတျခဲတှကေို လကျတဈဖကျတညျးနဲ့ ဖွညျးဖွညျးခငျြး သယျရှပေ့ေးလိုကျတယျ…
နှဈနာရီ လုံးလုံး လုပျပွီး မှ အုတျခဲတှေ သယျလို့ပွီး သှားတယျ… သူတောငျးစားခမြာမှာ ခြှေးတှရှေဲလို့ပေါ့…
အိမျရှငျမဟာ ခြှေးတှသေုတျဖို့ သူ့ကို ပုဝါ အဖွူတဈထညျကမျးပေးလိုကျတယျ…
သူ့ရဲ့ မကျြနှာနဲ့ လညျပငျးတှကေို သုတျလိုကျတော့ ပုဝါ အဖွူ ဟာ အမညျးရောငျပွောငျးသှားတယျလေ… နောကျထကျ အိမျရှငျမဟာ သူ့ကို ငှေ ၂၀၀၀ ကပျြပေးလိုကျတယျ…
သူတောငျးစားက အိမျရှငျမကို ကြေးဇူးတငျကွောငျး အကွိမျကွိမျ ပွနျပွောလိုကျတယျ…
အိမျရှငျမက “ငါ့ကို ကြေးဇူးတငျစရာ မလိုပါဘူး… ဒါဟာ မငျးရဲ့ခြှေးနဲ့ သှေးနဲ့ကွိုးစားပွီးမှ ရလာခဲ့တဲ့ လုပျအားခပါ…” လို့ ပွောတယျ…
သူတောငျးစားကလညျး အခိုကျအတနျ့လေး အတှေးတဈခုဝငျလာပွီးနောကျ “ကနြျော ခငျဗြားကို ဘယျတော့မှ မမှေ့ာ မဟုတျပါဘူးဗြာ… ဒါပမေယျ့ ကနြျော တဈခုလောကျ တောငျးဆိုပါရစေ… ဒီ ပုဝါလေးကို ကနြေျာ့ အတှကျ အမှတျတရလေးဖွဈအောငျ ပေးနိုငျမလားခငျဗြာ…? ”
အိမျရှငျမက ” ရပါတယျ… ယူသှားပါ ” လို့ ပွောလိုကျတော့ သူတောငျးစားခမြာ ပုဝါလေးကိုကွညျ့ပွီး ဝမျးသာပီတိဖွဈနရှောတယျ…
နှဈပေါငျးမြားစှာ ကွာပွီး နောကျပိုငျးမှာအဲဒီ သူတောငျးစားဟာ အဝတျအစား သပျသပျရပျရပျ နဲ့ တဈခြိနျက သူအုတျခဲသယျရှပေ့ေးခဲ့ရတဲ့ အဲဒီအိမျရှကေို့ ပွနျရောကျလာခဲ့တယျ…
အသကျကွီးနပွေီဖွဈတဲ့ အိမျရှငျမကွီးကို မွငျတော့…သူက“ကနြျော အရငျတုနျးက သူတောငျးစားပါ…အခုတော့ ကုမ်ပ်ပဏီ တဈခုရဲ့ ဥက်ကဌ ဖွဈနပေါပွီ…
#ခငျဗြားဟာ ကနြေျာ့ရဲ့ ပြောကျဆုံးနတေဲ့ ဂုဏျသိက်ခာကို ပွနျရှာပေးခဲ့သူပါ…
#ကနြေျာ့ရဲ့ ယုံကွညျစိတျကို ပွနျလညျ တညျဆောကျပေးခဲ့သူပါ…
#ခငျဗြားသာ မရှိရငျ ကနြျောဟာ လလှေငျ့နဦေးမှာ အမှနျပါဘဲ…” လို့ ရငျထဲက လှိုကျလှိုကျလှဲလှဲအသံလေးနဲ့ ပွောလိုကျမိတယျ…
အိမျရှငျမက “ဒါတှေ အားလုံးဟာ မငျးကိုယျတိုငျ တညျဆောကျခဲ့တာတှပေါဘဲ…မငျးဘဝကို မငျးကိုယျတိုငျ တနျဖိုးရှိရှိရပျတညျနိုငျခဲ့လို့ အခုလို အခွအေနဖွေဈလာတာပါ……” လို့ ပွောတယျ…။
အဲ့ဒီနောကျ…လကျတဈဖကျ ကုမ်ပ်ပဏီ ဥက်ကဌ ဟာ အိမျရှငျမကွီးကို အိမျတဈလုံး လကျဆောငျပေးဖို့ပွောတယျ… အိမျရှငျမကွီးက လကျမခံဘဲ ငွငျးပယျလိုကျပါတယျ…
ဥက်ကဌကွီးက ဘာကွောငျ့ငွငျးပယျလိုကျတယျဆိုတာကို နားမလညျနိုငျဘူး… အိမျရှငျမက ရယျပွီး ပွောလိုကျတယျ…
“ငါတို့ မိသားစု အားလုံးဟာ လကျတဈစုံဆီ ရှိကွတယျလေ… ကိုယျ့ခွထေောကျပျေါ ကိုယျတိုငျရပျတညျပွီး ဘဝတဈခုကို အဓိပ်ပာယျရှိရှိ တညျဆောကျလို့ ရပါတယျ…
လူဆိုတာဟာ တနျဖိုးရှိရှိ ရှငျသနျဖို့ အရေးကွီးတယျ…
ကိုယျ့ကိုယျကို လေးစားသလို ကိုယျ့ပတျဝနျးကငျြမှာ ရှိတဲ့ ကိုယျနဲ့သိတဲ့ လူတှကေိုလဲ ဂုဏျသိက်ခာတကျလာအောငျ လုပျပေးဖို့လိုတယျ… မသိတဲ့ လူတှကေိုလဲ လေးစားဖို့လိုတယျ…
ကိုယျကိုယျတိုငျကလညျး တပါးသူကို လေးစားတနျဖိုးထားမှ တဈပါးသူကလညျး ကိုယျ့ကိုယျ ပွနျ၍ လေးစားတနျဖိုးထားလာမယျ။ ကိုယျ့ဘကျက မပေးဆပျဘဲ တဈပါးသူဆီက အရငျရဖို့ဆိုတာ မဖွဈနိုငျပါဘူး။
ကိုယျ့ရဲ့ အလုပျကနေ ပြျောရှငျခွငျးဆိုတာကို ဖျောထုတျနိုငျမှလဲ ကိုယျ့ရဲ့ ဘဝဟာ တနျဖိုးရှိလာမှာ ဖွဈပါတယျ…
ကိုယျကွိုကျနှဈသကျတဲ့ အလုပျကို လုပျတယျ… ငှကွေေးရရှိမှုက တခွားသူတှလေောကျမမြားပမေဲ့…
ပိုကျဆံခမျြးသာပွီး ၀ိဉာဉျကငျးမဲ့နတေဲ့သူတှထေကျစာရငျ ဘဝတဈခုကို ရှငျသနျရတာဟာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး အသကျရှု ပွီး ပို၍ တနျဖိုးရှိပါလိမျ့မယျ…”
ပြည်မြို့တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့လှည့်ကင်းအား ဓါးဖြင့် ချိန်းခြောက်အန္တရာယ်ပြုသူများကို သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီး